महिलाको तीघ्रा प्रदर्शनको कुरा ! — Nepal Sarokar
“काठमाडौमा हुने अधिकतम मोटरसाइकल दुर्घटनाको कारण, बाटोको छेउछाउमा टांगिएका छोटा कपडा लगाएका मोडलहरु भएको होर्डिंङबोर्ड र पोस्टरहरु हुन् । केटाहरुको त्यतैतिर ध्यान जान्छ अनि के पत्तो पाउनु !“
चियागफदेखि कलेजका लेक्चर सम्ममा सुन्न पाइने दुर्घटनाबारेको तर्क हो यो । सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाली महिला कलाकारका फोटोहरुमा देखिने भद्दा कमेन्टहरु त हेरिसाद्दे हुँदैनन् ।
गाडीमा छोटो कपडा लगाएकी केटी चढोस्, सबैका आँखा उहितिर हुन्छन् । मानौं कुनै अनौठो ग्रहका मानिस हुन् तिनी । त्यस्तै बाटोमा हिंडिरहेका छोटो लुगा लगाएका केटीमाथिका आँखा, जिब्रो पड्काएको आवाज, अश्लिल शब्द मिसिएका स्वरहरु र बेसुरका सुसेलीहरुको त कुरा गरिसाध्य हुँदैन । सोध्न मन लाग्छ, उसको कपडा छोटो कि तिम्रो नियत खोटो ? उसको लुगाको लम्बाई सानो कि तिम्रो सोंचाईको परिधि साँघुरो ?
बलात्कारका घटनाहरुका पछाडिको कारण जान्न म जहिले पनि उत्सुक हुन्छु । धेरैजसो घट्नामा केटीको कपडा छोटो, उत्ताउलो भएकोले भन्ने आउँछ । के पांच र छ वर्षकी बालिका पनि पेन्टी नलगाई, जामा मात्र लगाएर खेलिरहेकोले बलात्कृत भइन् ? के ६० वर्ष पुगेकी आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई चुसाएका स्तन चोलिले छोप्न नसक्दा बलात्कृत भइन् ? यो पहिरनले होइन, यौनकुण्ठा र महिला प्रतिको हेपाहा प्रवृति, निच दृष्टिकोणले निम्त्याएको हो ।
के पांच र छ वर्षकी बालिका पनि पेन्टी नलगाई, जामा मात्र लगाएर खेलिरहेकोले बलात्कृत भइन् ? के ६० वर्ष पुगेकी आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई चुसाएका स्तन चोलिले छोप्न नसक्दा बलात्कृत भइन् ?
विदेश गएका केटी साथीहरुले सामाजिक संजालमा भरेका फोटोहरु देख्दा चकित हुन्छु म । कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ, छोटो कपडा लगाउनको लागि नै उनीहरु विदेश गएका हुन् । सभ्यता र अनुशासनको नाममा नेपालमा रहँदा कुर्ता सुरुवाल र फुल टिसर्ट पाइन्टमा हिंड्ने केटीहरु छोटो मिनिस्कर्ट, फ्रक लगाएर फेसबुकमा यसरि मुस्कुराइरहेका हुन्छन् मानौं, स्वतन्त्रताको मिठास चाखिरहेका छन् ।
उनीहरु नेपालमा रहँदा संस्कृति र अनुशासनको पाठ पढाएर पहिरनमाथि अंकुश लगाउने उनीहरुका नातेदारहरुले पनि त ती तस्बिर हेर्दा हुन् । फेरी यहाँ हुँदा लगाइने अंकुश केका लागि ? संस्कृतिको लागि ? आफ्नो संस्कृतिको बचाऊ त जहाँ रहेपनि गर्नुपर्ने होइन र ? अनुशासनको लागि ? के उनि त्यहाँ गएर अनुशासनहीन बन्न छुट छ ? सम्भावित हिंसाबाट बचाउनको लागि ? के उनि पुगेको ठाउँमा पुरुषहरु नै छैनन् ?
पहिरनको मापनले कसैको चरित्र, अनुशासनको मापन गर्दैन । संस्कृति र संस्कार मानवीय व्यवहारमा हुनुपर्छ । देखिएका चिल्ला तीघ्राले कामुकता देखाइरहेको हुँदैन, त्यो हेर्नेको मनमा गुम्सिएको यौनकुण्ठा हो । यसको अर्थ होइन कि आफ्नो सबै संस्कृतिलाई लत्याएर सबै केटीहरु छोटो पहिरनमा घुम्नुपर्छ । म त भन्छु, जसरि टोपी दिवस मनाउनेचलन ल्याइयो, त्यसरी नै गुन्यू चोली दिवस पनि मनाउनुपर्छ । तर पहिरन छनोट र लम्वाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रा हो ।